२ अर्व बराबर एनएमबि बैंकको ऋणपत्र खुल्ला, प्रत्येक ६-६ महिनामा ब्याज भुक्तानी हुने
एनएमबि बैंकले ऋणपत्र (डिबेञ्चर) खुल्ला गरेको छ । बैंकले वार्षिक ८.५ प्रतिशत ब्याजदर प्राप्त हुने २ अर्ब बराबरको १० वर्षे अवधिको ‘एनएमबि ऋणपत्र ८.५–२०८७/८८’ नामको ऋणपत्र आइतवार (जेठ २ गते)देखि बिक्री गरेको हो ।
प्रति कित्ता १ हजार दरको कुल २० लाख कित्ता ऋणपत्र मध्ये १२ लाख कित्ता व्यक्तिगत तवरबाट विभिन्न संघसंस्थाहरूलाई र ८ लाख कित्ता सर्वसाधारणमा विक्री गर्नेछ । सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको ८ लाख मध्ये ५ प्रतिशत दरको ४० लाख कित्ता सामूहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरी बाँकी ७ लाख ६० हजार कित्ता सार्वजनिक जारी गरेको हो । ऋणपत्र खरीदका लागि छिटोमा जेठ ५ र ढिलोमा जेठ १६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने छ ।
अंकित मूल्य एक हजार रुपैयाँ दरको ऋणपत्रका लागि न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम ८ लाख कित्तासम्मका लागि आवेदन गर्न सकिने छ । यसमध्ये एक अर्ब २० करोड रुपैयाँको ऋणपत्र ’प्राइभेट प्लेसमेन्ट’ बाट बिक्री गरिने छ । बाँकी ८० करोडको ऋणपत्रमध्ये ४ करोडको सामूहिक लगानी कोषहरुलाई छुट्याएको छ । बाँकी ऋणपत्र भने सर्वसाधारणले खरिद गर्न पाउने छन् । कम्पनीको यो ऋणपत्रलाई इक्रा नेपालले इक्रा एनपी इस्युअर रेटिङ ए माईनस प्रदान गरेको छ ।
यसले बैंक समयमै वित्तीय दायित्व पूरा गर्ने सम्बन्धमा पर्याप्त सुरक्षित रहेको संकेत गर्दछ । यस्ता कम्पनीहरुमा न्युन कर्जा जोखिम रहेको हुन्छ । एनएमबि बैंकको ऋणपत्र किन किन्ने ? बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल के. सी. भन्छन्, “एनएमबि बैंकको ऋणपत्र अहिले लगानीको लागि सर्वोत्कृष्ट औजार हो । हालको परिप्रेक्ष्यमा ८.५ प्रतिशत ब्याज उच्चतम हो, एनएमबि बैंक आफैं स्वस्थ, सबल र सक्षम बैंकको रुपमा आइरहेको छ । व्यवसायीक अधिकांश सूचांकमा पनि सबल छौं ।”
यस अर्थमा एनएमबि बैंकले जारी गरेको डिबेन्चर लगानी गरी ढुक्कले प्रतिफल प्राप्त गर्ने औजार भएको उनको भनाइ छ । ऋणपत्रमा लगानी गर्दा लगानीकर्ताले विभिन्न कोणबाट पनि सोच्नुपर्छ । लगानीकर्तामा एनएमबि बैंक ऋणपत्रभन्दा राम्रो विकल्प आयो भने यो बेच्न सकिन्छ । वा, डिबेन्चरलाई धितो राखेर ऋण लिन पनि सकिन्छ । विक्री प्रबन्धकमा सिद्धार्थ क्यापिटल रहेको उक्त डिबेञ्चर विक्री प्रबन्धकसँगै आस्बा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋणपत्र खरीदका लागि आवेदन दिन सकिनुको साथै मेरो शेयरमार्फत पनि आवेदन दिन सकिनेछ ।